Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေပါလာတဲ့ စက်လှေအား စစ်တွေအနီး ရခိုင်ရေတပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
Dr. Aye Maung said,"Our stand is that we won’t give even an inch of our land to those illegal Bangali Terrorist Immigrants. We won’t give up our land, our breeze, our water which are handed to us by our ancestors."
လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေပါလာတဲ့ စက်လှေအား စစ်တွေအနီး ရခိုင်ရေတပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
Mujahideens of Rohingya Solidarity Organization(RSO). RSO is now listed as one of terrorist groups under Al Qaeda.(photos taken by RSO)
ညနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်၊ ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၂ - လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေ လိုက်ပါလာတဲ့ စက်လှေတစ်စီး စစ်တွေအနီး ဆင်တက်မော်ကျွန်းပေါ်ရှိ သဲခုံရွာသို့ ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ် မြန်မာရေတပ်နဲ့ ရဲတွေက အချိန်မီတားဆီး ကာကွယ်လိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်း ရေတပ်ဘက်က ရရှိတဲ့ သတင်းအရသိရပါတယ်။
လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အဆိုပါ စက်လှေအား ရေတပ်က လက်နက်ချရန် အမိန့်ပေးသော်လည်း ၄င်းဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများမှာ လက်နက်မချသောကြောင့် ရေတပ်က ပစ်ခတ်ခါမှ လက်နက်တွေကို ရေထဲပစ်ချကာ လက်မြောက်အဖမ်းခံကြကြောင်း သိရပါတယ်။
ရေတပ်က ပစ်ခတ်ရာမှာ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တစ်ဦးကို ထိမှန်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါစက်လှေပေါ်မှာ စုစုပေါင်း ၇ ဦးပါလာပြီး ၄င်းတို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ တက်ဂနတ်ဘက်မှ ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အခုချိန်မှာ သက်သေအထောက်အားပြရန် ရေတပ်က ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေ ရေထဲပစ်ချသည့် လက်နက်တွေကို ရေငုံ့သမားအချို့နဲ့ ရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)ကို ယခုအခါ စစ်တွေဆေးရုံးကြီးသို့ ပို့ဆောင်လိုက်ပြီး ကျန် ၆ ဦးကို စစ်တွေ ထောင်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း စစ်တွေက မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဆင်တက်မော်ကို ၀င်ရောက်ဖို့ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ) စက်လှေ နောက်ထပ် ၁၀ စီးခန့် ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 06:13
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေပါလာတဲ့ စက်လှေအား စစ်တွေအနီး ရခိုင်ရေတပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး . All Rights Reserved